महाकाली पुल आयोजनाको मुआब्जा वितरण सुरु – Puleso
महाकाली पुल आयोजनाको मुआब्जा वितरण सुरु
महेन्द्रनगर /महाकाली पुल आयोजनाले चार लेन सडक निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । आयोजनाले गत शुक्रबारदेखि जग्गा धनीलाई मुअब्जा वितरण सुरु गरेको हो ।
महाकालीमा निर्माण गरिने पुलको पहुँच मार्गअन्तर्गत पर्ने जग्गाको मुआब्जा जग्गा धनीलाई आयोजनाले वितरण गरिरहेको पुल आयोजनाका प्रमुख प्रदिप भण्डारीले बताए । उनका अनुसार आयोजना कार्यालयले शुक्रबारदेखि मंगलबारसम्म १२ जनालाई जग्गाको मुअब्जा वितरण गरेको छ ।
पुलको पहुँच मार्गअन्तगर्त पर्ने दर्ता जमिनवाला २ सय ८० जनालाई मुअब्जा वितरण गरिने आयोजनाका प्रमुख भण्डारीले बताए । उनका अनुसार भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ११ का २ सय २२ जना, भीमदत्त–१२ का २२ जना र माहाकाली नगरपालिका वडा नं. १ का २५ जना परिवारलाई मुअब्जा वितरण भइरहेको छ ।
‘शुक्रबारदेखि मुअब्बा वितरणको कार्य सुरु गरेका हौं, मंगलबारसम्म १२ जनाले मुअब्जा लिएका छन्,’ योजना प्रमुख भण्डारीले भने । पुलको पुहँच मार्गमा पर्ने ऐलानी जमिनमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई मुअब्जा उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको उनले बताए ।
’ आयोजना प्रमुख भण्डारीले भने ‘ऐलानीमा बसिरहेका परिवारलाई पनि मुअब्जा वितरण हुन्छ, यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ, हामी पहल गरिरहेका छौं । चार लेनको सडकमा पर्ने ऐलानी जमिनमा बसोबास गरिरहेका परिवारको तथ्याङ्क लिइएको बताउँदै योजना प्रमुख भण्डारीलले छुटेकाहरुलाई निवेदन दिन आग्रह गरे ।
उनका अनुसार आयोजनाले ऐलानीमा बसोबास गरिरहेका परिवारको १ महिना अगाडी तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । ‘छुटेकाहरुका लागि आसार १४ गते १५ दिने सूचना जारी गरेका छौं, सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र नगरपालिकाको सिफारिसहित निवेदन दिर्नुपर्छ, ।
२० वर्ष अघिदेखि ऐलानी जग्गा उपयोग गर्दै आएकाले मात्र निवेदन दिन पाउने आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताए । उनका अनुसार ऐलानीमा बसोबास गरिरहेका परिवारको तथ्याङ्क लिएर भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइने छ ।
यसैगरी महाकाली पुलको पहुँच मार्गमा पर्ने ऐलानी जमिनमा बसिरहेका परिवारलाई मुअब्जा उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको र सम्बन्धित निकायमा छलफल भइरहेका कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दिपकप्रकाश भट्टले बताए ।‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ऐलानीमा बसिरहेकाहरुलाई मुअब्जा दिलाइन्छ,’। उनले भने, ‘सबै ऐलानी जमिन बसोबास गररहेकालाई आश गरेभन्दा राम्रो मुअब्जा पाउछन् । ‘सरकारले चाडै सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गर्छ, सबै नागरिकले जग्गा धनी हुन् पाउँछन्, ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गर्ने तयारी सरकारले गरेको बताए ।